Rehefa nifampiresaka elaela izy ireo dia nifampitory fitia ary nifanao fotoana. Nony tonga ny ora sy ny toerana voatondro nifanomezana dia nilaza ilay tovovavy fa tsy afaka, mbola manao “douche” fa ny anadahiny no hitsena azy. Tonga tokoa ilay nolazaina fa anadahiny ary nampandroso ilay tovolahy tany an-trano. Rehefa tafiditra ny varavarana dia nivadika ny resaka. Norahonan’ilay milaza fa anadahin’ilay vehivavy ilay tovolahy ary nilaza izy fa zanaka mpitsara ny anabaviny sady tsy ampy taona koa. Nohararaotiny nosavaina ary nalaina ny finday marika samsung S7 an’ilay tovolahy nolazainy fa nanodinkodina ny zandriny vavy. Tamin’izay no nahitany “carte bancaire” teny aminy. Nohadihadiany teo ny momba ilay tovolahy ary fantany fa mipetra-drery. Nohararaotiny hatrany ary nataony ny fomba nahatongavana tany an-tranon’ilay tovolahy 17 taona. Nasainy naka vola 700.000Ariary tamin’ilay « carte bancaire » ary nobatainy ihany koa ny solosainan’ilay tovolahy tao amin’ny trano fonenany. Nitantara ny zavatra nahazo azy tamin’ny fianakaviany ilay tovolahy avy eo. Nametraka fitoriana teny amin’ny polisy sampana « cybercriminalité » Anosy izy ireo. Nandray ny andraikiny avy hatrany ireo tompondraikitra ka tra-tehaka teny Ambohimiandra Mahazoarivo ilay lehilahy 23 taona nandrahona sady naka ny solosainan’ilay tovolahy. Tamin’ny fisavana ny trano fonenany dia mbola hita tao ilay solosaina nalainy an-keriny, nahitana fonosana rongony niaraka tamin’ny vola 300.000Ariary ambin’ilay vola 700.000Ariary nalainy.